नेपाल आज | टाउको काटेको १८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो यो कुखरा ?
टाउको काटेको १८ महिनासम्म कसरी बाँच्यो यो कुखरा ?
शुक्रबार, १७ माघ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
एज्न्सी। के टाउको काटेपछि कुनै प्राणी बाँच्न सक्छ ? तपाईं भन्नुहुन्छ, बिलकुल बाँच्दैन । तर, आजभन्दा ७२ वर्षपहिले अमेरिकामा यस्तै अचम्मको घटना भएको थियो । यहाँ एउटा कुखुरा टाउको काटेको १८ महिनासम्म पनि जीवितै थियो ।
यो कुखुरालाई 'मिराकल माइक' नाम दिइएको थियो । १९४५ को १० डिसेम्बरमा कोलोराडोको फ्रुटा बस्ने किसान लायड ओल्सेनले आफ्नी पत्नी क्लारासँगै कुखुरा काट्दै थिए । उनीहरूले कैयौं कुखुरा–कुखुरी काटे । यस क्रममा लायडले साढे पाँच महिनाको एउटा कुखरा काटे । कुखुराको नाम थियो— माइक । तर, उनलाई यस कुराले अचम्ममा पार्यो कि कुखुरा मरेन, बरु टाउको बिना नै हिँड्न थाल्यो।
यसपछि उनले कुखुरालाई बाकसमा बन्द गरे । भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा उक्त कुखुरा मरेको नभई जिउँदै थियो । टाउकोबिनाको जिउँदो कुखुराको खबर पूरै फ्रुटा र बिस्तारै अमेरिकाको कैयौं सहरमा फैलिन थाल्यो । यसका बारेमा परीक्षण गर्नका लागि साल्ट लेक सिटीमा रहेको यूटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले कैयौ कुखुराको टाउको काटे । तर, टाउकोबिना कुनै पनि कुखुरा बाँचेनन् ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार यो कुखुरालाई ड्रपबाट जुस पठाइन्थ्यो । तर, १९४७ को मार्चमा मृत्यु भएको थियो । जुस दिएपछि भोजन नलीलाई सिरिन्जले सफा नगरेका कारण मृत्यू भएको लायड ओल्सेनले बताए । यसै कारणले माइकको सास रोकिनाले मृत्यु भएको थियो । मिराकल माइकको चर्चा यतिसम्म चुलिएको थियो कि लायड ओल्सेनले यो कुखुरा हेर्न आउने मानिसका लागि टिकटकै व्यवस्था गर्नुपरेको थियो ।
उनले उक्त समयमा उक्त कुखुराबाट महिनाकै ४ हजार ५ सय डलरको आम्दानी गर्थे । आज ४ हजार ५ सय डलरको मूल्य ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यो कुखुराकै कारण लायड ओल्सेनको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आएको थियो । बीबीसीको रिपोर्टअनुसार न्युक्यासल युनिभर्सिटीमा सेन्टर फर बिह्याभिएर एन्ड इभोलुसनमा कुखुरा विज्ञ डा. टम स्ल्डर्स भन्छन्, “कुखुराको टाउको उसको आँखाको कंकालको पछाडि एउटा सानो हिस्सामा हुने गर्छ ।” रिपोर्टका अनुसार माइकको चुच्चो, अनुहार तथा आँखा निक्लेको थियो । तर, स्मल्डर्सका अनुसार कुखुराको मस्तिष्कको ८० प्रतिशत हिस्सा जीवितै थियो, जसका कारण माइकको शरीर, धड्कन, सास, भोक र पाचन तन्त्र चलि नै रहेको थियो ।
कुखुरा टाउको काटिएको